नेपाल आइडलमा मनलाग्दी निर्णय, अर्काे हप्ता पनि चारै जना स्टेजमा देखिने – Everest Dainik – News from Nepal
नेपाल आइडलमा मनलाग्दी निर्णय, अर्काे हप्ता पनि चारै जना स्टेजमा देखिने
एपी वान टेलिभिजनबाट प्रसारण भैरहेको नेपालको एकमात्र रियालिटी शो ‘नेपाल आइडल’ अहिले आलोचनाको भागी बन्न पुगेको छ । सयौ प्रतिष्पर्धीहरुलाई पाखा लगाउँदै अहिले चार जनाले प्रतिष्पर्धा गरिएको उक्त कार्यक्रममा हिजो शुक्रबारको एपिसोड इलिमिनेसनको राउण्डबाट एक जनाले ‘नेपाल आइडल’को शोबाट विदाई हुने थिए ।
कार्यक्रमको नियम अनुसार बिहिबार भएको गला राउण्डको प्रस्तुति पछी दर्शकले पठाएको भोटको आधारमा एक जना प्रतिस्पर्धी बाहिरिनु पर्ने हो । सबैको कौतुहलताको विषय बनेको को बाहिरिन्छ अनि कसले ‘नेपाल आइडल’को बाजी मान्र्छ भन्ने । हजार्राै दर्शक श्रोताहरु त्यसैको प्रतिक्षामा बसीरहेका छन् । तर, निर्णायकहरुले आफ्नो पावर प्रयोग गर्ने नाममा कार्यक्रमको नियम बिपरित चारै जनालाई यस हप्ता सुरक्षित पारे । ‘नेपाल आइडल’ मा प्रतिष्पर्धा गरिरहेका चार जना प्रतियोगीहरु निशान भट्टराई, सागर आले, बुद्ध लामा र प्रताप दासको प्रतिष्पर्धा अझै एक हप्ता लम्ब्याइदिए ।
उनीहरुको गायकी क्षमता हेर्न पाउनु सौभाग्यको कुरा पनि हो । उनीहरु सबै जनाको प्रतिष्पर्धा गायकी क्षमता राम्रो छ । देश विदेशमा रहेका नेपाली दर्शकहरुले उनीहरुलाई स्टेकमा हेर्न चाहन्छन् । तर निर्णायक मण्डल जो अहिले पर्दामा देखिएका छन्, न्यू बज्राचार्य, इन्दिरा जोशी, कालिप्रसाद बास्कोटालगायतको यो आफूखुसी बच्चा खेले जसरी गरिएको निर्णय भने असोभनिय छ ।
निर्णायकको निर्णय उचित नभएको भन्दै अहिले सामाजिक सञ्जालहरुमा तीव्र आलोचना भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले आयोजकले पैसाको खेती गर्नका लागि कसैलाई आउट नगरेको भन्दै कार्यक्रमको बिस्वस्नियतामाथि नै प्रश्न गर्न थालेका छन् । अन्तिम समयमा कार्यक्रमको नियम बिपरित निर्णय गरेर आफुले पठाएको भोटको अपमान गरिएकोप्रति आक्रोशित बनेका छन् । ।
सामाजिक संजाल फेसबुकमा भवानी पन्त लेख्छन् ‘मेरो निन्द्राको मुल्य चाहियो, अर्कालाई यसरि झुक्याउन हुन्छ ? झुक्याउनुको पनि सिमा हुन्छ नि ।’
फेसबुकमै दिपेश शाही लेख्छन्, ‘घाटामा चलेको ‘टेलिभिजन शो’ तपाइँको खल्तिमा चिलाएको पैशा कुम्ल्याउनका लागि १ हप्ता थपिएको छ। सम्पति धेरै भए भोट हालि रहनु होला । गए पैशा जान्छ। साहुले कमाउँछ।’
फेसबुकमै इमान्दार कमल लेख्छन्, ‘एकै दिनमा एसएमएसबाट करोडौं कमाउने खेलो अहिले नै बन्द गरेपछि यत्रो दिमाख लगाएर थालनी गरेको बिजनेस प्लानिङको के अर्थ ? आयोजकसंग यत्ती पनि बुद्धि हुन्न त ? साथीहरू पनी फेसबुकमा किन बिरोध गर्या होलान खान दिउ न जनाताको पैसा सकेसम्म खाउन !
शैलेस लोप्चनले फेसबुकमार्फत यसरी आक्रोस पोख्छन्, ‘एपी वान टेलिभिजनले दर्शकको गोजिमा हात हाल्न खोज्यो ।’
लाखौ दर्शकको मनमा बस्न सफल यस एपी च्यानलबाट प्रशारित हुने नेपालको एक मात्र रियालीटि सो भनिएको ‘नेपाल आइडल’ मा निर्णायक टिमको मनलाग्दी निर्णयका कारण अहिले आलोचनाको भागी बनाएको छ । कार्यक्रममा पैसाको खेलवाड भएकोसम्मको आरोप आइरहँदा आयोजकले भने यसबारे मुख खोलेको छैन । चौतर्फी आलोचनाहरु भइरहँदा निर्णायक मण्डल सुनेनसुनेझै गरी बसेको छ ।
सयौ प्रतिष्पर्धीहरुलाई पछार्दै अगाडि आई ४ जनामा आई पुग्दा भने निर्णायकको यस्तो लापर्वाही हुनु गलत हो । उसोतः यसअघि पनि ‘नेपाल आइडल’ सानातिना कमजोरीहरु भने नभएका होइनन् । प्रतियोगिको परिवारसँग मिलाउने बलिउड तरिका अपनाउँदा ‘नेपाल आइडल’ को धज्जी उडेको थियो, प्रमुख अतिथि आएर स्टेजमा गीत गाउँदा जर्ज बनेकी इन्दिरा जोशीको रुवाबासी भएको थियो जुन हावा सावित भएको थियो । यी यावत यस्ता सानातिना गल्तीहरु भइरहँदा अहिले आएर जर्जहरुले यस्तो गल्ती गर्नु गलत थियो । यसले हजारौ गीत संगीतप्रेमी दर्शकहरुको मनमा ठेस पुगेको कुरा ‘नेपाल आइडल’ का जर्ज मानिएकाहरुले महशुस गर्न जरुरी छ ।
ट्याग्स: nepal idol, pushpa mahara